Wararka suurtagalka ah ee AirPods 3 iyo AirPods Pro | Waxaan ka socdaa mac
Wararka suurtagalka ah ee AirPods 3 iyo AirPods Pro
Muddo bilo ah waxaan ka hadleynay wararka suurtagalka ah ee moodooyinka soo socda ee AirPods. Munaasabaddan waxaan kula wadaageynaa xoogaa tilmaamo ah oo ku saabsan waxa Apple ku soo bandhigi karto AirPods sannadkan. Isbeddel naqshad aad u qurux badan oo ku yimid jiilka saddexaad ee AirPods iyo mid yar laakiin aan ka yarayn isbeddel muhiim ah jiilka labaad ee AirPods Pro.
Soo koobid kooban waxay ka dhigan tahay in isbedelada ay noqon karaan kuwo si muuqata loogu muuqan karo dadka isticmaala ee doonaya inay iibsadaan AirPods isla markaana xoogaa uga yaraadaan kuwa doorta qaabka Pro. Imaatinka AirPods Max wuxuu suuqa ka beddelay dhowr qodob, qaar xun iyo kuwo kale oo wanaagsan, hadda waxay ku xiran tahay hormuudka mar kale.
1 AirPods 3 waxay la mid noqon doontaa AirPods Pro
2 Isbedelada jiilka labaad AirPods Pro
AirPods 3 waxay la mid noqon doontaa AirPods Pro
Tani waa war xan ah oo bilo laga faallooday shabakadaha, way ka dhowaan kartaa sidii hore. Waxaa jira falanqeeyayaal badan oo kahadlaya a naqshadeeyaan oo la mid ah kuwa hadda jira ee AirPods Pro loogu talagalay dhagaystayaasha jiilka saddexaad, wax dad badani soo dhaweyn lahaayeen iyo kuwa kale oo aan sidaa u badnayn.
Raaxada adeegsiga ee ay leeyihiin AirPods isku mid maahan qof walba. Taasina waa in qof kastaa uu yahay adduunyo oo tanina way ku kala duwanaan kartaa iyadoo ku xiran hadba cidda weydiisata, kiiskeyga waxaan doorbidaa naqshadeynta barnaamijka 'Pro' laakiin tani maahan inay noqoto kiiska kiisaska oo dhan. Faahfaahin kale oo muhiim ah ayaa ah in AirPods 3 uusan ku dari doonin Qaabka baajinta buuqa ama qaabka hufnaanta.
Isbedelada jiilka labaad AirPods Pro
Haddii aad ku dari karto hagaajinta naqshadeynta moodooyinka hadda jira, kuwani waxay ku saleysan yihiin naqshadeynta qalabka dhegaha laftiisa, sanduuqa lacag bixinta iyo gudaha tan oo ay la socdaan processor-rada cusub. Qaabka cusub waxaan ku heli doonnaa wax yar oo isbeddel ah qaybtiisa dibedda, laakiin waxay ka hadlaysaa baabi'inta ama yaraynta qaybta dheer ee qalabka dhegaha.
Si kastaba ha noqotee, kuwan waxay ku dari doonaan habka baajinta dhawaaqa iyo qaabka hufnaanta. Waxaa jira hadal heyn ku saabsan bilaabitaankeeda bisha xigta ee Maarso sidaa darteed mabda 'ahaan wax badan uma harin in la ogaado waxa dhabta ah ee ku jira.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Wararka suurtagalka ah ee AirPods 3 iyo AirPods Pro
Apple TV + kaliya waxay leedahay 3% saamiga suuqa Mareykanka.